Farsamooyin Cajiib Ah Oo Lagu Soo Jiito Gabar Walba | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Farsamooyin Cajiib Ah Oo Lagu Soo Jiito Gabar Walba
Waxaan idiin soo gudbineynaa farsamooyin xeeladeysan oo haweeney kasta aad kusoo jiidan kartid.
Dhagaha ufur waxay kuu sheegeyso xittaa haddii ay been tahay
Gabdhaha waa jecelyihiin ninka dhageysta cabashadooda iyo dhibaatooyinka heysta, marka aad dhagaha u furtid isla markaana u ogolaatid inay hadasho waxaad hal tallabo dheertahay ragga kale ee tartanka ugu jira ama doonaya, iska hubi inaad ku qasbin go’aan, waxay dooneysaa inaad dhageysatid kaliya si ay wax walba kuugu soo bandhigto.
Ammaan ugu qubeey
Yaanan jecleyn in la amaano hadda hadhoow? Fadlan ha siinin ammaan been ah, haddii kale banaanka ayay kugu tuuree si deg deg ah ayay kuu nacaysaa, xaqiiji inaad ku amaantid sida ay tahay iyo wnaaagga ay leedahay si aanan xad dhaaf ahayn.
Haddii runta ku amaantid waxaan kuu xaqiijin karaa inaad ka guuleysaneysid, si daacadnimo leh ugu amaan wanaageeda si dabacsanaan leh ayay kugu abaal marin doontaa.
Haddii aad tan sameysid waxaad noqoneysaa hogaamiyaheeda, waxaad u baahantahay inaad tustid inaad tahay midka u taagan ee dhiiri galiya kuna taageera culeysyada heysta, tani micnaheeda ma ahan inaad ka yeeshid wax kasta oo ay sameyso ama ay tiraahdo, haddii kale taas waxay kaa dhigeysaa geel dacayda la haayo oo dhicinii loo jeediyo aada.
Si,kastaba, waa inaad ku xushmeysaa kuna qiimeysaa dookheeda, taasina guusha haasaawa walba oo aad haweeney la sameeyneysid.